Android Phone ေတြမွာ ျမန္မာေဖာင့္ႏွင့္ ကီးဘုတ္ သြင္းျခင္း ~ .
အခုကျနော်တင်ပေးမယ့် post ကတော့ Android Phone တွေမှာ မြန်မာ ဖောင့် ထည့်နည်းလေးနဲ့မြန်မာ ကီးဘုတ်ထည့်တဲ့နည်းလေးပါ..။ ပထမဆုံး Android Phone တွေမှာ font မထည့်ခင်မှာ အရင် root လုပ်ထား ဖို့တော့လိုပါတယ်.။ အောက်ကအဆင့်တွေအတိုင်းလိုက်ပြီး root လုပ်လိုက်ပါ.။ Root လုပ်ဖို့ software ကို ဒီနေရာကနေ သွားပြီးယူလိုက်ပါ..။ ပြီးရင် ဖုန်း ကို PC နဲ့မချိတ်ခင် မှာ
Settings >> Applications >> Development >>USB debugging ဆိုတာကို အမှန်ခြစ်လေးပေး ထားရပါမယ်..။
ပြီးရင် ဖုန်းကို PC (Computer) နဲ့ချိတ်ပေးလိုက်ပါ..။ ဖုန်းကို PC နဲ့ချိတ်ရင် တစ်ခါတစ်လေ ဖုန်းမှာ မေးခွန်းမေးတတ်ပါတယ်..။ Phone Charge လုပ်မှာလား SD card ကို ၀င်မှာလား မေးပါတယ်.။ အဲ့လိုမေးလာရင်တော့ phone charge လုပ်တာကိုရွေးပေးလိုက်ပါ..။ ဘာမှမမေးရင်တော့ ဘာမှလုပ်ပေးစရာ မလိုပါဘူး..။ ပြီးရင်တော့ အပေါ်မှာ တင်ထားပေးထားတဲ့ zip file ကိုဖြည်လိုက်ပါ..။ အဲ့ဒီထဲကမှ SuperOneClick.exe ဆိုတာကို Double Click နှိပ်ပေးလိုက်ပါ..။
ပြီးရင် Root ဆိုတဲ့Button လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ..။ ခနစောင့်ပေးလိုက်ပါ..။ သူ ့ဘာသာ Root လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်..။ စက္ကန်၃၀ ကနေ ၁၀ မိနစ်အတွင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.(ဖုန်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည် ပါတယ်..။)ကျနော်လုပ်တာတော့ ၁၅ စက္ကန်လောက်ပဲကြာပါတယ်..။
ပြီးရင်တော့ Root လုပ်တာ အောင်မြင်တဲ့အကြောင်း Box လေးကျလာရင်တော့ OK ပေးလိုက်ပါ..။ ပြီးရင် ဖုန်းကို PC နဲ့ချိတ်ထားတာ ဖြုတ်လိုက်ပါပြီးရင် ဖုန်းကို Restart လုပ်ပေးပါ.(Power ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ပေး လိုက်ပါ.။) အထက်ပါအဆင့်တွေအကုန်လုပ်ပြီးရင်တော့ ဖုန်းကို Root လုပ်လို့ပြီးပါပြီ..။ Root လုပ်ပြီးရင် ဖုန်းထဲကို Application လေးတစ်ခုသွင်းရပါမယ်..။ ဘယ်လိုသွင်းရမလဲမသိရင်တော့ ဒီနေရာက နေ Android ဖုန်းတွေကို application သွင်းတဲ့ Software လေးကိုသွားပြီး Download လုပ်လိုက်ပါ..။ ပြီးရင် အဲ့ဒီ software ကို zip ဖြည်ပြီး Install လုပ်လိုက်ပါ..။ Desktop ပေါ်မှာ Android Injector ဆိုပြီး ဆေးထိုးအပ်ပုံလေးနဲ့ရောက်နေပါလိမ့်မယ်..။ ပြီးရင် Root Explorer (2.9.3).apk လေးကို Download လုပ်ပါ..။ Application(.apk)ကို Download လုပ်ပြီးရင်တော့ အခုနက Desktop ပေါ်မှာ ရောက်နေတဲ့ Android Injector ကို Double Click နှိပ်လိုက်ပါ..။ (ဖုန်းကို PC နဲ့ချိတ်ထားပေးဖို့ တော့လိုပါတယ်..။)
Double Click နှိပ်ဖွင့်ပြီးရင် Select Files ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ ပြီးရင် အခုနက Download လုပ်ထားတဲ့ Root Explorer (2.9.3).apk ဆိုတဲ့ file လေးကို ရွေးပေးလိုက်ပါ..။ သူ့ဘာသာသွင်းသွား ပါလိမ့်မယ်..။ ပြီးရင်တော့ အောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးကိုပြပါတယ်..။ ပြီးရင် တစ်ဆက်တည်း ဖုန်းထဲထည့်ဖို့ myanmar font ကို ဒီနေရာ ကနေdownload လုပ်ပါမယ်..။ DroidSansFallback.ttf ဆိုပြီးဖြစ်နေပါမယ်.။ Zawgyi ဖောင့်ကို rename လုပ်ထားတာပါ..။ Download လုပ်လို့ရလာတဲ့ DroidSansFallback.ttf ဆိုတာကို ဖုန်းရဲ့SD Card (Memory Card) ထဲထည့်ပါ..။ ပြီးရင် ဖုန်းကို PC နဲ့ချိတ်ထားတာ အဆက်အသွယ်ဖြုတ်လိုက်လို့ရပါပြီ..။ ပြီးသွားရင်တော့ အခုနက Install လုပ်ထားတဲ့ Root Explorer ဆိုတာကို ဖွင့်လိုက်ပါ..။ (root explorer ကို စဖွင့်ဖွင့်ချင်းမှာ root access ကို allow လုပ်မလားလာမေး ပါလိမ့်မယ် allow ကိုရွေးပါ ဒါမှနောက်ပိုင်းတွေဆက်လုပ်လို့ရမှာပါ.။) Root Explorer ကနေ အခုနက မှတဆင့် SD Card ကိုသွားပါမယ်.။ အဲ့ဒီကနေမှ အခုနက ထည့်ထားတဲ့ DroidSansFallback.ttf ကို long click (ကြာကြာဖိ)ပြီး copy လုပ်ပါ ။
ဒီထိပြီးရင်တော့ Root Explorer ကနေပြီးတော့ /system/fonts ထဲသွားပါ ။ ရောက်ရင်တော့ Paste ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ..။ ပြီးရင် အထက်ကအတိုင်း Root Explorer ကနေ အခုနက မှတဆင့် SD Card ကိုပြန်သွားပါမယ်.။ အဲ့ဒီကနေမှ အခုနက ထည့်ထားတဲ့ DroidSansFallback.ttf ကို long click (ကြာကြာဖိ)ပြီး copy ထပ် လုပ်ပါ ။ ပြီးရင် Root Explorer ကနေပြီးတော့ /system/fonts ထဲပြန်သွားပါ ။ အောက်ကပုံအတိုင်း (Mount R/W ) အနီပြထားတာကိုနှိပ်ပါ.။
အားလုံးပြီးရင်အောက်ကပုံအတိုင်းဖြစ်နေရပါမယ် (မမှန်ရင်အပေါ်ကဟာ loop ပြန်ပတ်ရပါမယ် )
ဒီအထိပြိ;ရင် DroidSansFallback.ttf ကို permission ပြောင်းပေးရပါမယ် အဲအတွက် DroidSansFallback.ttf ကို ကြာကြာဖိထားပါ အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာပါမယ်
အောက်ပုံအတိုင်း permission ကိုပေးလိုက်ပါ
ပြီးရင်တော့ OK နိုပ်ပါ ။ အခုဆိုရင်တော့ Paste ကိုနိုပ်လို့ရပါပြီ ။ နိုပ်လိုက်ရင် Warning ဆိုပီး ရှိပီးသားလို့ လာပြပါလိမ့်မယ် overwirte လိုက်ပါ Yes ကိုရွေးပါ ။ အခုဆိုရင် မြန်မာ ဖောင့် မြင်ရပီဖြစ်ပါတယ် ( တချို့စက်တွေ ကတော့ စက်ကို ReBoot လုပ်ပြီးမှ အလုပ်လုပ်ပါတယ်) keyborad သွင်းဖို့အတွက်ကတော့ အောက်ကလင့်မှာ keyboard ကို အရင်ဒေါင်းပါ
ဒေါင်းပြိ;တော့ install လုပ်လိုက်ပါ ။ Install လုပ်နည်းကတော့ အထက်ကအတိုင်း Root Explorer ကို Install လုပ်တဲ့အတိုင်းလုပ်ရုံပါပဲ..။ Install ပြီးရင်တော့ Setting ထဲက Language & keyborad ထဲမှာ MyDroid Soft Keyboard ကို select (အမှန်ခြစ်) ပေးလိုက်ပါ။
အခုဆိုရင် သုံးလို့ရနေပါပြီ.။ အစမ်းသုံးကြည့်ချင်ရင်တော့ စာရိုက်လို့ရမယ့် နေရာ တစ်နေရာရာ ကိုသွားပါ။ အလွယ်ဆုံး Message ပို့တဲ့နေရာကိုသွားပါပြီးရင် စာရိုက် လို ့ရတဲ့ Box လေးကို ကြာကြာလေး ဖိထားပေးပါ..။ ပြီးရင် Input Method ကိုရွေးပါ အဲ့ဒီကနေမှ MyanDroid Soft Keyborad ကို ရွေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ စာရိုက်လို့ရသွားပါပြီ..။ အခုဆိုရင် မြန်မာလိုရေးထားတာကိုပါဖတ်လို့ရတဲ့အပြင် မြန်မာလို့ ရိုက်ချင်ရင်ပါ ရိုက်လို့ရသွားပါပြီ..။ ကဲ့အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်..။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်အပင်ပန်းခံပြီး phone မှာ ကိုယ်တိုင် font install လုပ်ပြီးကိုယ်တိုင် ပုံတွေရိုက်ယူပြီးတင်ထားတဲ့ပို့စ်ဖြစ်လို့တခြားနေရာမှာတင်မယ်ဆိုရင် ကျေးဇူးပြုပြီး Reference >> www.kyaysarlay.blogspot.com ဆိုပြီးထည့်ပေးပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်..။ အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူး တင်လျက်ပါ..။
စာေရးသူ - ေၾကးစားေလး at 3:34 PM
high October 3, 2011 at 7:07 PM